पर्यटन निर्यातमा पनि घाटा ? - Karobar National Economic Daily
पर्यटन निर्यातमा पनि घाटा ?
query_builderApril 20, 2017 8:41 AM supervisor_accountभीमप्रसाद पन्त visibility771
नेपालमा पर्यटन व्यवसायको औपचारिक यात्राले आधा शताब्दी नाघिसकेको छ । यस अवधिमा पर्यटनशून्य कतिपय देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा पर्यटनले ओगट्न थालेको छ ।
हामी भने पर्यटन नीतिको अस्पष्टतामा अलमलिएका छौं, पूर्वाधारमा सरकारी लगानी ज्यादै कमजोर छ । फलतः विश्वका प्रमुख टुर एड्भाइजरहरूले उत्कृष्ट गन्तव्य भनेर जतिसुकै प्रचार गरे पनि हाम्रो पर्यटन आगमनको ग्राफ खासै माथि चढ्न सकेको छैन । अझ प्रतिपर्यटक आम्दानी त उल्टै घटेको जस्तो देखिन्छ ।
सस्ता पर्यटकको संख्या बढ्दा हामी गर्व गर्न त पाउँछौं तर त्यसले पर्यावरणीय प्रभाव र सामाजिक प्रभावमा छाडेको नकारात्मक पक्षको लागत भने हेर्दैनौं । त्यसले नेपाली पर्यटनको आधार कमजोर बनाएको छ र कहीँ जान नसके नेपाल जाने भन्ने खालको मानसिकता विश्व पर्यटन बजारमा देखिन सक्छ ।
तर, हाम्रो विदेश यात्रा भने बढ्दो छ । पर्यटनकै निम्ति मलेसिया, सिंगापुर पुग्ने नेपालीको सख्या बढ्दो छ । वस्तु व्यापारघाटाको अनुपातमा ज्यादै ठूलो अन्तर रहेकोमा सबैभन्दा बढी सम्भावना र प्रतिस्पर्धी मानिएको सेवा व्यापार पर्यटनमा पनि नेपालले सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।
वस्तु व्यापारका क्षेत्रमा आयात–निर्यातको अनुपातमा निकै अन्तर छ । उपभोगवादका कारण मात्र आयात बढेको होइन, विप्रषणको आय र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले यसो भएको हो ।
नेपालको व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउन पर्यटन प्रमुख सहयोगी हुन सक्छ । सरकारी योजनाले पनि यही तथ्यलाई स्विकारेको छ । विश्व पर्यटनमा नेपालको योगदान र सहभागिता न्यून भए पनि पर्यटकीय गन्तव्यका दृष्टिले नेपाल विश्वमा चर्चामा रहने र नछुट्ने नाम हो ।
हिमाल आरोहण, पदयात्रा, दृश्यावलोकन, वन्यजन्तु आरक्षको भ्रमण, धार्मिक पर्यटन, पुराताŒिवक सम्पदा, यी सबका कारण नेपाल पर्यटकीय रोजाइमा पर्नैपर्ने देश हो । तर, पर्यटनबाट नेपालले जे–जति कमाउँछ, त्योभन्दा केही प्रतिशत बढी नै नेपालीले विदेश भ्रमणका लागि खर्च गर्छन्; अर्थात् पर्यटन व्यापारमा पनि नेपाललाई घाटा छ ।
गत वर्ष नेपालले विदेशी पर्यटकबाट ४१ अर्ब ७६ करोड कमाएकोमा नेपाली पर्यटकले विदेश गएर ५६ अर्ब ४१ करोड खर्च गरेको तथ्यांक पाइन्छ । पर्यटन व्यवसायीका लागि र सरकारलाई समेत यस तथ्यांकले तर्साएको छ । पर्यटनमा नेपालीले कमाएकोभन्दा बढी बाह्य पर्यटनका लागि खर्च हुँदो रहेछ ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण क्षेत्रमा यो हालत छ भने नेपालको अर्थतन्त्रको जरा कति कमजोर रहेछ थाहा हुन्छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
नेपालीहरूको आम्दानी बढ्दै गएको छ । विदेशतिर बस्ने नेपालीको संख्या पनि बढ्दै छ । यस्तोमा नेपालीहरू विदेशको भ्रमणमा जानु स्वाभाविकै हो, तर नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या र तिनले नेपालमा बसुन्जेल गर्ने खर्चको प्रवृत्तिचाहिँ एकदम निराशालाग्दो देखिन्छ । चिन्ताको विषय यही हो । गत वर्ष ६ लाख ९८ हजार नेपाली भ्रमणका लागि विदेश गएका र जम्मा ७ लाख २९ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएका भन्ने तथ्यांकले नेपालले विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नै नसकेको भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ।
दुई पक्षबाट भएको खर्च हेर्दा नेपालीले विदेश जाँदा बढी खर्च गर्ने गरेको र विदेशीले नेपालमा रहँदा–बस्दा एकदम कम खर्चमा टार्ने गरेको पनि यसबाट देखिन्छ ।
नेपालीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदाका फाइदा पनि छन् । तिनले त्यहाँ देखेर आएका कुराबाट केही न केही सिकेर आउँछन् । त्यसले उनीहरूलाई नेपालमा आफ्नो व्यवसायमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्छ ।
नेपालबारे सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ । तर, यसले देखाउने अर्को पाटो के हो भने हामी नेपालमै कम घुम्छौं, विदेशमा घुम्न भने खर्च गर्न सक्छौं । अर्को, नेपालमा घुम्दा सकेसम्म कम खर्च गर्ने तर विदेशमा भने बढी खर्च गर्ने गर्छौं । सिंगापुरमा गएर पानीभित्रको दृश्य हेर्न वा वनमा जनावर हेर्न जति पनि खर्च गर्छौं, तर ४–५ हजार खर्च गरेर प्याराग्लाइडिङ अथवा बन्जी जम्प गर्न कन्जुस बन्छौं ।
यहाँ पनि पर्यटनका गतिविधि छन्, तर तिनले नेपाली पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकेको पाइन्न । त्यस्तै व्यापार विस्तारका प्याकेजहरूमा मलेसिया, सिंगापुर भ्रमणको सुविधा दिन व्यापारी व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
त्यस्तो सुविधा नेपालभित्रै घुम्नका लागि दिने नीति व्यवसायीहरूले लिनु आवश्यक छ ।हामीले बाह्य पर्यटकबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नीति लिए पनि नेपालका प्रमुख गन्तव्यहरूमा नेपालीहरूकै भीड बढी देखिन थालेको छ ।
पोखराको पर्यटन अर्थतन्त्रमा नेपालीहरूको हिस्सा ४६ प्रतिशत रहेको व्यवसायीको भनाइ पाइन्छ । सौराहा र लुम्बिनीमा पनि आन्तरिक पर्यटककै संख्या बढी छ । आन्तरिक पर्यटन यस उद्योगका लागि राम्रै हो, तर वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्र असफल हुनुचाहिँ चिन्ताको विषय हो । अझ नेपालको सुदूर पश्चिम पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ।
यस क्षेत्रमा पूर्वधार तयार पार्न सके आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति हुने निश्चित छ । राराताल, शुक्लाफाँटा, खप्तड लेकको सौन्दर्यको प्रचार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुन सकेको छैन ।
केही विशेष पर्यटकलाई छाडेर भन्ने हो भने पोखरा, लुम्बिनी, सौराहाको त्रिकोणमा नेपालको पर्यटन खुम्चिरहेको छ । सुदूर पश्चिममा बल्ल केही होटल खुल्न थालेका छन् । ठूला लगानीका ती होटल सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँ पर्यटन फस्टाउन सक्छ ।
त्यस्तै रारा क्षेत्र सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । सडकको स्तरोन्नति र त्यहाँ अन्य पूर्वाधारको विकास गर्न सकिए पर्यटन व्यापार बढाउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि पर्यटन बोर्डले आक्रामक प्रचार नीति लिनु आवश्यक छ । फेरि पनि यी क्षेत्रमा आउने पर्यटकको भीड नेपाली नै हुने सम्भावना अत्यधिक छ ।
विश्वमै प्रमुख गन्तव्य भनी अरूले सित्तैंमा प्रचार गरिदिँदा पनि हामीले बाह्य पर्यटक भि-याउन नसक्नु दुखद पक्ष हो । अर्को, हामीकहाँ आउने पर्यटक भारततिर मोडिएका छन् । खासगरी -याफ्टिङका पर्यटकहरू भारतले खोसिरहेको छ । हामीले चिनियाँ पर्यटकबाट सोचेजतिको फाइदा लिन सकेका छैनौं । यसमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।
सन् १९५१ मा रसियाली नागरिक बोरिस नोकोलायेभिच लिसानेभिचले द रोयल होटल खोलेपछि नेपालमा आधुनिक होटलको जग स्थापना भएको थियो ।
काठमाडौंकेन्द्रित होटल अहिले नेपालभर विस्तारित हुन थालेका छन् । नेपालको पूर्वी सिमानादेखि पश्चिम सिमानासम्म करोडौं लगानीका होटल खुल्न थालेका छन् । अहिले नेपाल एयरलाइन्स मात्र होइन, निजी क्षेत्रका थुपै्र हवाई सेवा उपलब्ध छन् ।
हिमालयन एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्दै छ । पर्यटनमा विविधीकरण पनि हुँदै छ । पर्यटकको आगमन संख्या ७ लाख नाघेको छ । आन्तरिक पर्यटनले पनि निकै फड्को मारेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली पर्यटन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । पर्यटनबाट नेपालले जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा आउने पर्यटनको संख्या उत्तरी चीनबाट धेरै नै बढेको छ । तिनीहरू खर्चालु पनि छन् । तर, तिनले खोजेको पर्यटनको प्रोडक्ट हामीले दिन सकेका छैनौं । उनीहरूले आफूले बोकेर ल्याएको पैसा खर्च गर्ने ठाउँ नपाएर फिर्ता लग्ने गरेका छन् ।
त्यसो त पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी पनि बढ्दो छ । पर्यटक आगमनमा भारतीयको संख्या सबैभन्दा बढी छ, तर तिनीहरू धार्मिक पर्यटनमा आउने र खानपिनका सामानसहित लिएर आउने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा तिनले उल्लेख्य प्रभाव पारेको छैन ।
भारतीय युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी पर्यटनको प्याकेज विकास गर्न सके त्यसबाट नेपालको पर्यटनले बढी लाभ लिन सक्थ्यो ।
(लेखक नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का महासचिव हुन् ।)
पर्यटन लुम्बिनी उत्कृष्ट गन्तव्य पाेखरा